Susana မာရီယာ Urbano Mateos | | အကြပ်အတည်း, အလုပ်
ပcrisisိပက္ခသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်အရာများစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လူအများကလှည့်နေကြသည် self-အလုပ်အကိုင် အလုပ်သမားဈေးကွက်တွင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့လူများကသူတို့အတွက်သူတို့လုပ်သောငွေအားလုံးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည် အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ဖွင့်လှစ်သည့်ဘားများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အခြားသူများကသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအွန်လိုင်းဖွင့်လှစ်ကြသည်။ အချို့သည်ပိုမိုကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ရန်စတင်သည်၊
စပိန်လူမျိုးများနှင့်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အကျပ်အတည်းနှင့်အတူနေထိုင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအကျိုးဆက်အဖြစ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်၊ Self- အလုပ်လုပ်ကိုင်အလုပ်သမားတစ် ဦး တိုးအတိအကျမသတ်မှတ်သော်လည်းဘဏ္selfာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့သေးငယ်တဲ့အလုပ်အကိုင်တွေပြုလုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည် ထူးခြားသောဝင်ငွေ ဒါကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုတယ်၊
စပိန်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်ဥပဒေများနှင့်အညီလုပ်ကိုင်လိုသောပြည်သူတို့၏ဆန္ဒကိုလည်းဆန့်ကျင်သည်။ ဒါပေမယ့်တရားဝင်အလုပ်ကနေအကျိုးအမြတ်ရနိုင်ဖို့အမြဲတမ်း ၀ င်ငွေမရှိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်အလုပ်တွေကအရမ်းကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ရက်အနည်းငယ်မှာစာရင်းသွင်းတာကစိတ်ပျက်စရာပဲ။
ဤကိစ္စများတွင်ဘယ်မှာ မင်းဟာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိဘူးများစွာသောလူလျှင်တွေးမိ သူတို့လုပ်သောအလုပ်အတွက်ငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးနိုင်သည်ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာတရားမ ၀ င်တဲ့အတွက်၊ တရားမ ၀ င်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ချင်ဘူး၊
ကောင်းပြီ, ဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမရှိဘဲငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးပါ, ဒါပေမယ့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အကျိုးဆက်များကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်အချို့ကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ကျွန်ုပ်တွင်အလုပ်ရှိပါကကျွန်ုပ်ငွေတောင်းခံလွှာကိုထုတ်ပေးလို့ရမလား။ ငါအလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်ငါလုပ်နိုင်မလား? အနည်းဆုံးနှင့်အများဆုံးတွက်ချက်ရန်ရှိပါသလား။ ဤသံသယများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးအချို့သောသူများသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိဘဲငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
2 ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ငွေတောင်းခံရန်လိုအပ်သည်
8 Freelancer တစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်မှာမှတ်ပုံတင်ရမလဲ။
ယေဘူယျအားဖြင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းသည်ဒုတိယနှင့်ဒုတိယအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါကငွေတောင်းခံလွှာကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်လုပ်သားတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းအားလပ်ချိန်၌မင်းသည်အနုပညာရှင်၊ လက်မှုပညာရှင်၊ ဖန်တီးသူ၊ အယ်ဒီတာ၊
၎င်းသည်ဘဝ၏စား ၀ တ်နေရေးဖြစ်သည့်အဓိကလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သောအခါမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိရသင့်သည် RETA (ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်အထူးအစီအစဉ်)
ငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် အလုပ်ရှင်များ၊ ပညာရှင်များနှင့်ထိန်းသိမ်းသူများ၏သန်းခေါင်စာရင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်မဟုတ်ရင်တော့ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်လိမ့်မယ်။ ဤသန်းခေါင်စာရင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသူမည်သူမဆိုလူမှုဖူလုံရေးတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပဲငွေတောင်းခံလွှာများကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးရန်မလိုဟူသောအချက်သည်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော VAT နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၀ င်ငွေခွန်ကိုပေးဆောင်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ငွေတောင်းခံရန်လိုအပ်သည်
အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးရန်လိုအပ်လျှင်စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ဝင်ငွေသည်မကျော်လွန်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် SMI (ပညာအရည်အချင်းအနည်းဆုံးလစာ)2016 ခုနှစ်တွင်€ 9172,80 (ငွေပေးချေမှု 14) ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုကျော်လွှားနိုင်ရင်ပြည်သူ့ဘဏ္Treာရေး၊ အခွန်အေဂျင်စီ၊ လူမှုဖူလုံရေးစတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအခွန်ပြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဒဏ်ငွေပေးနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့လူမှုဖူလုံရေးကငွေတောင်းခံနေတုန်းမပေးရသေးတဲ့အခကြေးငွေတွေပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးနိုင်တယ်။
ဤငွေပမာဏကိုမကျော်လွန်ပါကသင်သည်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သူအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုပါ၊ သို့သော်သင်၌ဤ ၀ င်ငွေကိုကြေငြာရန်တာ ၀ န်ရှိပြီးသင့်အနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ VAT ကိုပေးရမည်။
အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပြီးအလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်များကိုစုဆောင်းမိလျှင်၊ သင်ငွေတောင်းခံလွှာများကို ထုတ်ပေး၍ မရပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးလျှင်၎င်းတို့သည်သင့်အားအလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်အတွက်ပေးချေခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဆောင်းပါးအစမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဥပမာတွေလိုပဲသင်၏ထောက်ပံ့ကြေးကျန်ရှိနေသေးသောအရာများကိုအသုံးပြုပြီးလှုပ်ရှားမှုအသစ်တစ်ခုကိုအလွတ်တန်းအဖြစ်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေလျှင်တောင်သင်၌မှတ်ပုံတင်ထားရမည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရှင်များနှင့်လက်ကျန်များသန်းခေါင်စာရင်း ငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏လှုပ်ရှားမှုအတွက်သင်အများဆုံး ၀ င်နိုင်သည့်ပမာဏကိုလေးစားရန်မှာလည်းတင်းကြပ်စွာလိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအထက်တွင်ဖော်ပြထားသော SMI ထက်တစ်နှစ်အတွင်းနှစ်စဉ်ဝင်ငွေထက်မပိုစေရ။
သမဝါယမများအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်မဟုတ်သောသူများအတွက်အလုပ်များအပြင်အလုပ်များအပြင်အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိရန်ကူညီသည်။ သူတို့သည်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူကြားတွင်ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးခြင်း၊ အကြံပေးခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
မင်းလိုအပ်တဲ့အခါ ရံဖန်ရံခါတစ်ခုငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးပါ, သမဝါယမလည်း၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း။ နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်မှာသင်သည်ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုကြားကြိုကြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးငွေတောင်းခံလွှာများကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောစာချုပ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သမ ၀ ါယမကစုစုပေါင်းဥပဒေကြမ်း၏ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်လစဉ်အသင်း ၀ င်မှုကိုလဲလှယ်ရန်သင့်ကိုယ်စားသင့်အားထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
•အထင်ရှားဆုံးမှာလစဉ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်ပေးငွေကိုသင်ရှောင်ရှားခြင်းသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်တစ်လလျှင်ယူရို ၂၆၀ ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းထားသည် (ယူရို ၅၀ 'မြှင့်တင်ရေး' သည်လအနည်းငယ်သာကြာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်ကျန်ငွေအတိုင်းပေးရမည် Self- အလုပ်) ။
လစဉ်အသင်း ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်၊ သမဝါယမကွဲပြားခြားနားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုဆက်ကပ် ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖုံးလွှမ်းသော။ သင်အလုပ်ကိုသင်လုပ်ပြီးသမဝါယမကသင်၏အမည်ဖြင့်ငွေတောင်းခံလွှာကိုထုတ်ပေးပြီးနောက်ငွေတောင်းခံလွှာ၏စုစုပေါင်းကိုစာချုပ်အစတွင်သတ်မှတ်ထားသည့်ရာခိုင်နှုန်းကိုဆက်လက်ထားရှိပြီးသင်၏ချက်လက်မှတ်တွင်ငွေဖြည့်သည်။
•စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အခွန်အကြံဥာဏ်များကိုသင်စုဆောင်းသည်၊ ဥပမာ၎င်းတို့သည် VAT ကိုတွက်ချက်ခြင်းကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုဂရုစိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
•အချို့သမဝါယမများကလိုအပ်ရင်သင့်အတွက် ၀ င်ငွေခွန်ပင်ပေးဆောင်သည်။
•သင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပြီးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြိုကြားကြိုကြားအလုပ်များလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကသင်စုဆောင်းထားသည့်ထောက်ပံ့ကြေးအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေရန်သမ ၀ ါယမတစ် ဦး သည်သင်လိုအပ်သောနေ့ရက်များအတွက်မှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်။
•အလားတူစွာသင်သည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကြိုကြားကြိုကြားကြိုလုပ်ထားသောအလုပ်များပြုလုပ်ပါကသမဝါယမသည်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။
သင်ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်နေသည့်အခါကြိုးစားပါ တူညီသောငွေပမာဏနှင့်အတူငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးမထားပါနဲ့, ဒါကြောင့်ဘဏ္itာရေးကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်များအတွက်ပိတ်ဆို့မှုသို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေ ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်အလေ့အထအလေ့အကျင့်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမထားဘူး။
ဘဏ္theာရေးတာ ၀ န် ၀ တ္တရားသည်မတည်ရှိတော့ကြောင်းသတိရပါ သင်သက်ဆိုင်ရာ VAT နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ် နှင့်လှုပ်ရှားမှု၏နှစ်ပတ်လည်အကျဉ်းချုပ်။
သင်တစ် ဦး အလွတ်ဖြစ်သကဲ့သို့သကဲ့သို့, သင်ငွေတောင်းခံလွှာကိုလိုအပ်သောအခွန်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်ပြည့်စုံဖြည့်စွက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ရှိသည်။ အခွန်အေဂျင်စီသို့တင်ပြရန်လိုအပ်ချက်အတွက်ငွေတောင်းခံလွှာအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းပါ။
ဒီဂျစ်တယ်ငွေတောင်းခံလွှာများမမှန်ကန်ပါ သူတို့မှာဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်မရှိရင် ထို့ကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်ငွေတောင်းခံလွှာကို PDF ပုံစံဖြင့်ထုတ်ပေးပါက၎င်းတို့သည်မှန်ကန်မှုရှိစေရန်မှန်ကန်စွာလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကပုံမှန်စာရွက်စာတမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။
ဘယ်အချိန်မှာ ထပ်တလဲလဲဝင်ငွေ (ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုရန်) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လစာထက် ၂၀% ကျော်လွန်, အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? SMI သည်လက်ရှိတွင်တစ်လလျှင်ယူရို ၆၅၅.၂၀ ရှိပြီးလူမှုဖူလုံရေးအတွက်ငွေပေးချေမှုနှုန်းမှာ ၂၅၆ ယူရို (ယူအက်စ် ၅၂) ဖြစ်သည်။ ငွေတောင်းခံလွှာတစ်ခုချင်းစီအတွက်သင်၏ VAT သည် ၂၁% ဖြစ်လျှင်လကုန်သောအခါသင်သည်မည်သည့်ငွေကိုမျှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏နံပါတ်များသို့သင်အသားတင်အမြတ်၏ရာခိုင်နှုန်းထည့်ရမည်။
အမှုအရာများကိုတွက်ချက်ရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်ဖြစ်သင့်၊ မသင့်ကိုသိရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာမှာ FreeLancer ဂဏန်းတွက်စက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်လစာအတွက်လစဉ်ငွေတောင်းခံရန်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » အကြပ်အတည်း » မည်သည့်အချိန်တွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မရှိဘဲငွေတောင်းခံလွှာကိုလုပ်နိုင်သနည်း။
မင်္ဂလာပါစူစန်နာ၊ ခင်ဗျားဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ SEPE တွင်သူတို့ကကျွန်ုပ်သည် (IAE တွင်ကျွန်ုပ်မှတ်ပုံတင်ထားသလောက်ကာလပတ်လုံး) ကြိုတင်ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်လျှင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်၎င်းတို့အားထိုငွေစာရင်းများကိုယူဆောင်လာစေခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားအရင်းအနှီးများထုတ်ပေးမည့်ကာလအတွက်အကူအညီများကိုနုတ်ယူနိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ကာလ၏အဆုံး။
Jaime အဲလ်ဘတ် Aguado ဟုသူကပြောသည်
Jaime Albert Aguado သို့ပြန်သွားပါ
Mooverang, သင့်မိုဘိုင်းဖြင့်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန် app ကို